Gqiba iividiyo zakho ezijonga ubuchwephesha ngokuhambisa iiprojekthi zakho kwi-iMovie ukuya kwi-Final Cut Pro X | Ndisuka mac
UJavier Porcar | | Mac App Store, Izaziso, Tutorials
Unxibelelwano phakathi kwezicelo luhlala luxatyiswa nangaphezulu ukuba ezi zivela kumvelisi omnye, ke oko kuthintela iingxaki zokuhambelana kwelinye icala, kunye nolawulo lomsebenzi esaziyo kwinkqubo yokuqala. Njengomzekelo woku kungqinelana, kukunxibelelana esinako phakathi kwe-iMovie kunye neFinal Cut Pro X. Abasebenzisi abaninzi abathanda iividiyo ezahlukeneyo: usapho, ukuhamba okanye iminyhadala yezemidlalo, benza iiprojekthi zabo kumhleli wevidiyo oza kumgangatho kwiiMacs zethu. Imisebenzi esiyifumana kwi-iMovie namhlanje yanele ividiyo encinci ukuba inkampani ivelise ukukhuthaza iimveliso zayo kwiwebhusayithi okanye kumboniso womsitho.
Nangona kunjalo, kuxhomekeke kubunzima bevidiyo, kwezinye iimeko iMovie iya kwanela. Kodwa Ukuba sifuna ukwenza uhlengahlengiso lomfanekiso ngokugqithileyo, sinokufuna i-Final Cut Pro X. Ke ukuba sisebenzisa zombini, kutheni ungasebenzi ngokuthe ngqo kwinkqubo yobungcali ka-Apple?
Amaxesha amaninzi esi sigqibo asicaci kangako kumzuzu wokuqala. Ke ngoko, kuba iMovie yazisa umsebenzi "Thumela imuvi kwiFinal Cut Pro" Ndihlala ndiqala ukusebenzisa iMovie kwaye ukuba izinto ziya zisiba nzima: ukulungiswa kwemibala emininzi, iividiyo ezininzi kunye neendlela zokumamela, ukuvumelanisa iklip, njl.
Into yokuqala yitsho ukuthumela ngaphandle kwi-Final Cut Pro kugqibelele. Akukho nto ishiywe ecaleni kwendlela kwaye ayazisi ngokungahambelani komsebenzi othile, njengoko kusenzeka xa kuthunyelwa kwelinye ilizwe kunye nezinye iinkqubo. Okwesibini, isitayile seApple, kwimizuzwana embalwa iprojekthi yethu ivuliwe kwi-Final Cut Pro. Okokugqibela, iApple inezi zicelo zimbini zilungiselelwe ngokupheleleyo iiMacs zethu. ukuya kuthi ga kwi-Mac enobuchule bomsebenzisi wasekhaya, inokusingatha zombini izicelo ngokutyibilikayo nangokutyibilikayo Ifana neMac eneempawu eziphezulu. Umahluko wentsebenzo uya kufumaneka xa kusenziwa iiplagi ezithile okanye umsebenzi wokugqibela (ukuvalwa kweprojekthi).
Ukufikelela kulo msebenzi, kufuneka sibe neprojekthi yeMovie evulekileyo, cofa kuyo nayiphi na indawo kwaye ufumane umsebenzi kwi: Ifayile- "Thumela imuvi kwiFinal Cut Pro"
Ke ngoko, ukuba uqala ukubona ukuba iMovie iyasilela kwaye uzimisele ukuhlawulela naluphi na ukhetho lokugqibela lwe-Pro X, ndiyakuqinisekisa ukuba ukuphathwa kwayo akuyi kukushiya ungakhathali.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » Gqiba iividiyo zakho ezijonga ubuchwephesha ngokuhambisa iiprojekthi zakho kwi-iMovie ukuya kwi-Final Cut Pro X
I-BitMedic Antivirus, i-Malware kunye ne-Adware ziyafumaneka kuphela nge-euro ezingama-0,99 ixesha elincinci